Sys-Con - စိတ်အနှောင့်အယှက်အရှိဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်၊ | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, မေလ 13, 2007 တနင်္ဂနွေ, မေလ 13, 2007 Douglas Karr
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာကျွန်တော်ဟာ Google Alert အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုရခဲ့တယ် ဘာကြောင့် Ajax က Java ကိုကျော်တက်ခဲ့တာလဲ။ ဆောင်းပါးကြီးတစ်ခုလိုအသံမကြားဘူးလား။ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမဖတ်ဖူးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူး။ ငါရောက်လာသောအခါ၊
စာမျက်နှာဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့, pop-up div တစ်ခုကမျက်လုံးများကြားမှာသေးငယ်တဲ့နီးကပ်တဲ့ link တစ်ခုနဲ့ထိသွားတယ်။ Pop-up သည် pop-up window တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် pop-up blocker သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အခြားကြော်ငြာများကို sidebar အတွင်းတွင်ဖော်ပြရန်ဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့်ကြော်ငြာသည်ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုသည့်အကြောင်းအရာကိုအမှန်တကယ်ပိတ်ဆို့ထားသည်။
အကယ်၍ သင်အောက်သို့ဆင်းလိုက်လျှင်၊ ကြော်ငြာသည်ဆွေမျိုးများနှင့်တူညီနေလိမ့်မည်။ သင်ကြော်ငြာကိုအနီးကပ်နှိပ်ခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းအရာလုံးဝဖတ်လို့မရပါ။
ဆိုက်ကိုဖွင့်သည်နှင့်ဗွီဒီယိုကြော်ငြာစတင်သည် အသံနှင့်! ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုမှာအသံကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမထားပါဘူး။
စာမျက်နှာအတွင်းတွင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကြည့်နေသောကြော်ငြာ ၇ ခုနှင့်အကြောင်းအရာမရှိပါ။
ဒီစာမျက်နှာမှာလမ်းညွှန်နည်းလမ်းငါးခုထက်မနည်းပါ။ listbox၊ အလျားလိုက် tabbed မီနူး၊ အလျားလိုက်မီနူး၊ အလျားလိုက် ticker menu၊ ဘေးဘားမီနူးများရှိတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာမည်သူမဆိုရှာတွေ့နိုင်မလား။ ငါတကယ်ရှိမရှိဖြစ်စေမစဉ်းစားမိပါတယ် မည်သည့်အရာမဆို မီနူးများနှင့်ကြော်ငြာများအကြားရှိဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာများ!
နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင် CNET ကိုကြည့်ရအောင်။ CNET တွင် multimedia အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်းရှိသည် (သင် play ကိုနှိပ်ပါ if သငျသညျ, နှင့်ရိုးရိုးအမြင်အတွက်ကြော်ငြာ7ခု! သို့သော်အညွှန်းနှင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာအပြင်အဆင်သည်၎င်းကိုဖုံးကွယ်မည့်အစားအကြောင်းအရာကိုမြှင့်တင်သည်။
အကယ်၍ ဒီဇိုင်းသည်သတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အရေးကြီးသောကဏ္ feature တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုသင်မထင်ပါကဤနှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်ချပြမည် Alexa စာရင်းဇယားနှိုင်းယှဉ်မှု:
မင်းရဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ကဘာလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် / သို့မဟုတ်နည်းပညာဆိုဒ်များကိုသိမ်းထားပါ။
မေလ 13, 2007 မှာ 5: 10 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
နောက်ဆုံးတော့! ဟုတ်ကဲ့၊ sys-con ပါ။ အ ဖြတ်သန်းခဲ့ရဖူးသမျှ စိတ်အနှောက်အယှက်အရှိဆုံး ဝဘ်ဆိုဒ်။ အဲဒီတစ်ခုပေါ်မှာ *** အောက်ခြေမှတ်တိုင်ကြီး ကို သင်တွေ့ပါသလား။ ပြီးတော့ site က Firefox မှာတောင် မှန်ကန်စွာ render မလုပ်ပါဘူး။
မေလ 14, 2007 မှာ 1: 00 AM
Sys-con သည် ကျွန်ုပ်သွားလိုသော ဝဘ်ဆိုဒ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် နဖူးစည်းစာတန်းများသည် ကောင်းစွာမပြနိုင်ဘဲ firefox တွင် ပိတ်ရန်ခက်ခဲသည်။
မေလ 14, 2007 မှာ 6: 17 AM
Adblock (Filterset.G) နှင့် Flashblock ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် Firefox ကိုအသုံးပြုသောအခါ အနည်းငယ်ပိုကောင်းပါသည်။ အလွန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ပေါ့ပ်အပ် div သည်သာ ပေါ်နေသေးသည် (အခြားကြော်ငြာများအားလုံး မရှိတော့ပါ)။